मलमासको बेला किन शारिरीक सम्पर्क गर्नुहुदैन ? यस्तो भन्छ ज्योतिष शास्त्र (भिडियो) – cafeguff
मलमासको बेला किन शारिरीक सम्पर्क गर्नुहुदैन ? यस्तो भन्छ ज्योतिष शास्त्र (भिडियो)
मलमास सुरु भयो । मलमासको समयमा बिशेषगरी पुजा, धार्मिक कार्य गर्न नहुने बताईन्छ । यति मात्र होईन मलमासको बेला श्रीमान श्रीमती पनि संगै बस्न नहुने बताईन्छ । कतिपयका श्रीमती माईत जाने वा श्रीमानबाट टाढा बस्ने गर्छन् । यसको एउटै उदेश्य भनेको शारिरिक सम्पर्क हो ।
श्रीमान श्रीमतीबीच हुने शारिरिक सम्पर्कका कारण बच्चा बस्न सक्छ र मलमासमा बच्चा बस्यो भने त्यो बच्चाको कुण्डली नै नबन्ने युवा ज्यो. पुण्यप्रसाद पौडेल बताउँछन् । त्यसका कारण मलमासमा श्रीमान श्रीमती संगै हुन नहुने परम्परा अझ पनि कायम छ ।
अधिकमासलाई पुरुषोत्तममास भनेर पनि भनिन्छ । किनभने अधिकमासमा भगवान नारायणको पूजा गरिने र अधिकमासमा माहात्म्य वा कथा सुन्ने र दान गर्ने परम्परा रहेको छ । यसो गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन भनेर कथामा बताईएको छ ।
अधिक मासमा कुनै पनि शुभ कर्महरू वा साईतहरू हुदैनन् । यसै हुनाले महिनाभरी कुनै पनि विवाहादि कार्य व्रतवन्ध लगायतका कुनै पनि कार्यहरू छैनन । दैनिक रूपमा गर्दै ल्याईएका कर्महरू जस्तो नित्य पाठपूजा गर्नलाई चाहि कुनै छेकथुन हुदैन ।
वैदिक परम्परा अनुसार नेपालको इतिहासमा छैटौ शताब्दिदेखि सोह्रौ शताब्दीसम्मका अभिलेखहरूमा आषाढमा र पौषमा मात्र अधिकमास पाइन्छ । पछि आएर भने अनादी वैदिक परम्परालाई छोडी तेह्रौ शताब्दीको सिद्धान्तशिरोमणीको ज्योतिषफलबाट अन्य महिनाहरूमा पनि अधिकमास परेको उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
पतिगृहमा विवाहदेखि पछिको पहिलो वा विवाह गरेको वर्षमा आउने महिना आषाढमा बस्ता बुहारीले सासू पिर्ने, पहिलो क्षयमासमा बस्ता आफ्नै शरीरलाई पीडा गर्ने, पहिलो जेठमा बस्ता जेठाजु पिर्ने, पैलो पुसमा बस्ता ससुरालाई पिर्ने पहिलो अधिकमासमा बस्ता पतिलाई पिर्ने, पहिलो चैतमा पितृगृहमा बस्ता आफ्नै बाउलाई पिर्ने कुरा मुहूर्तमार्तण्डदिकामा पाईन्छ ।
मुहूर्तमार्तण्डको १६२८ संवत्मा र मूहूर्तचिन्तामणिको १६५७ संवत्मा रचना भएको हो । यस्ता हुने नहुने कुराको प्रतिपादन गर्ने अरु सबै ग्रन्थ यी ग्रन्थहरूभन्दा पछिका देखिन्छन् । वैदिक परम्पराका प्राचीन ग्रन्थहरूमा यस कुराको प्रतिपादित देखिदैँन ।
३६५ दिनको एक वर्ष वा १२ महिना हुन्छ । सूयको गतिअनुसार गणना गरिने मासलाई (महिना) सौरमास भनिन्छ भने, चन्द्रमासको गतिको आधारमा गणना गरिने मासलाई चन्द्रमास भनिन्छ । सामान्यतया सैरमासमा संक्रान्ति देखि मसान्तसम्ममा २९ दिनदेखि ३२ दिनसम्मको एक पहिना हुन्छ भने चन्द्रमासमा एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्म २९ दिन १२ घण्टा ४४ मिनेट र २४ सेकेन्डको एक चन्द्रमास हुन्छ । त्यस्तै सौरमासको गणनाअनुसार एक वर्षमा जम्मा ३६५ दिन हुछन् भने, चन्द्रमास अनुसार दिन गणना ३५४ दिन मात्र हुन्छ ।
सौरमासभन्दा चन्द्रमासको दिन गणनाअनुसार ११ दिन बढी वर्षमा हुने गर्दछ । यसरी गणना गर्दा ३२ महिना, १६ दिन, १ घण्टा र ३६ मिनेट पुगेपछि एक अधिकमासबाट अर्को अधिकमास पर्दछ वा आउँछ । यस क्रमले हरेक वर्षमा ११ दिनको फरकलाई जोड्दै जाँदा तीन वर्षमा एक महिना सौरमास भन्दा चन्द्रमास वढि हुन पुग्छ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार अधिकमास भन्नाले जुन चन्द्रमासभित्र सूर्य संक्रान्ति पर्दैन त्यसलाई भनिन्छ । त्यस्तै जुन चन्द्रमासभित्र २ वटा सूर्य संक्रान्ति पर्दछ, त्यसलाई क्षयमास भनिन्छ ।
अधिकमास हरेक ३२ महिना १६ दिन १ घण्टा, ३६ मिनेटपछि आउँछ भने क्षयमास घटीमा १९ वर्ष र बढिमा ४१ वर्षमा एक पटक आउने गर्दछ । यस्ता ग्रहगत अधिकमास र क्षयमासका समय समायोजन गर्ने कार्यहरूमा अन्न विभिन्न स्थानमा बेग्ला बेग्लै विधि र किसिम पनि पाईन्छ । यसै सौरमास र चन्द्रमासलाई तीन वर्षमा समायोजन गरिने हुदा यस अवधिलाई अधिकमास भनेर भनिएको हो । सौरमास जब सूर्य–चन्द्रमाको गतिमा आधारित हुने र चान्द्रमास तिथिमा आश्रित हुने भएकाले सौर्यमास जस्तो चान्द्रमास सामान्यतय गतिमा निश्चित हुदैन ।
यहि नियम अनुसार अधिकमास वा महिना बृद्धि हुने हुन्छ । अधिकमास खासै यहि महिनामा हुन्छ भनेर हुदैन । चान्द्रमासको गति अनुसार जुनसुकै महिनामा पनि पर्न सक्छ । “सर्वेषु मासेष्वधिमासकः स्यात” भन्ने प्रमाणबाट अधिक मास जुनसुकै महिनामा पनि पर्न सक्छ ।
भुलेर पनि नगर्नुस यी काम
फल प्रप्तीको लागि गरिने शुभ कार्यहरु गर्नुहुदैन जसमा सबै प्रकारका ब्रत , विवाह , नयाँ बेहुलीको गृह प्रबेश ,चूडाकर्म, सोमयज्ञ, श्राद्ध, यज्ञ, ऋषि पूजन ,मुण्डन, नयाँ कार्यको थालनी, यात्रा, कार्यको शुभारम्भ गर्नु अशुभ हुन्छ गर्नु हुँदैन भनिएको छ । यो समयमा गंगा स्नान गर्नु , दान दिनु र श्री हरीको आराधना गर्नु भनिएको छ ।
यति मात्र होईन मलमासको बेला श्रीमान श्रीमती पनि संगै बस्न नहुने बताईन्छ । कतिपयका श्रीमती माईत जाने वा श्रीमानबाट टाढा बस्ने गर्छन् । यसको एउटै उदेश्य भनेको शारिरिक सम्पर्क हो ।
श्रीमान श्रीमतीबीच हुने शारिरिक सम्पर्कका कारण बच्चा बस्न सक्छ र मलमासमा बच्चा बस्यो भने त्यो बच्चाको कुण्डली नै नबन्ने युवा ज्यो. पुण्यप्रसाद पौडेल बताउँछन् । त्यसका कारण मलमासमा श्रीमान श्रीमती संगै हुन नहुने परम्परा अझ पनि कायम छ । ज्यो. पौडेलका अनुसार मलमासका अन्य के–के कुराहरु गर्न हुँदैन हेरौं यो भिडियो । बिभिन्न अनलाइनहरूकाे सहयाेगमा
ज्यो. पौडेलका अनुसार मलमासका अन्य के–के कुराहरु गर्न हुँदैन हेरौं यो भिडियो ।
कोरियन युवतीहरुले किन पाल्छन् काखी र योनीमा रौँ !, न्युयोर्कका ब्यूटी सैलुनहरुमा गुप्तांगका रौँ बढाउने ब्राजिलीयन मैन विधिको क्रेज बढ्दाे
विरुवा रोप्नका लागि आफ्नो घरको गार्डन खन्दा भेटिएको थोत्रो बाकस खोलेर हेर्दा तीन छक परे दम्पती, त्यसपछि यस्तो भयो,